Takahiro Sakurai – Stars – MMANIME
Blame! Blame! IMDb - 6.7/10 Rotten Tomatoes - 55% Myanimelist - 7.2/10 ဒီ‌animeကို 2017တုန်းက Netflixကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။ Sci-fiဇာတ်လမ်းကြည့်ရှုချင်တဲ့သူတွေမလွတ်တန်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အနာဂတ်ကာလမှာ AIနည်းပညာတွေနဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုလူသားတွေဟာတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ် တနေ့ကျတော့ ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ AIနည်းပညာနဲ့မြို့ကြီးဟာ လူသားတွေကိုရှင်းလင်းမှုတွေစတင်လုပ်‌ေဆာင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ရှင်းလင်းမှုခံရတဲ့အတွက် လူသားတွေရဲ့အရေအတွက်ဟာ လက်တစုပ်စာလောက်ပဲကျန်တော့ပြီး စားစရာတွေရှားပါးတဲ့အထိဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကေလီဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး Net terminalမျိုးရိုးဗီဇရှိတဲ့လူသားတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတော့...... - လူသားတွေကိုမြို့ကြီးကဘာလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့လဲ - ကေလီဆိုတဲ့လူဟာဘယ်သူလဲ - Net terminalမျိုးရိုးဗီဇရှိတဲ့သူတွေဟာ ဘာထူးခြားလို့ကေလီဟာလိုက်ရှာနေရလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ Translated by DrNyan Encoded by Leo D. Lucas BLAME! (1080p) BLAME! (720p) BLAME! (480p)
Our Seven-Day War " လူကြီးတွေကိစ္စဘာဆိုတာငါစိတ်မဝင်စားဘူး... ချီရိုနို... ငါတို့နင့်မွေးနေ့မရောက်ခင်အထိထွက်ပြေးကြရအောင်" ဆိုတဲ့လူငယ်တို့ရဲ့လွပ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ခံယူချက်အပေါ်မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်တတ်တဲ့စိတ်ကိုစပြီးဖွင့်လှစ်ပြသလိုက်နဲ့ Our Seven Days War ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင်တော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကချစ်ကြိုက်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ပြောင်းရတော့မယ့်အချိန်ထိတောင်မဖွင့်ပြောရဲတဲ့ကောင်လေး "မာမိုရူ" နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်အခက်အခဲတွေအသီးသီးရှိနေကြတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားအဖွဲ့လေးရဲ့ခုနှစ်ရက်တာကိုယ့်စိတ်ကြိုက်နေကြရင်းဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရပြီးဘယ်လိုမျိုးနားလည်ဖေးမကြမယ်ဆိုတာကိုရိုက်ကူးပြထားတဲ့ Anime ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်တဲ့ သီချင်းတွေကလဲဇာတ်လမ်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိပြီး အကြမ်းအရမ်းတွေမပါပေမယ့် (7)ရက်အတွင်းဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြသလဲဆိုတာရင်တမမနဲ့ကြည့်ရှု့ရမည့်အပြင် " လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့တကယ့်ပုံစံအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ရင်းကြီးပြင်းလာပြီးလူကြီးဖြစ်လာကြတယ် ဒီလိုဆိုရင်ငါလူကြီးမဖြစ်ချင်တော့ဘူး " ချီရိုနို " နင့်ကိုငါချစ်တယ်" ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အတူ ရင်ထဲရှိတာကိုမြိုသိပ်မထားဘဲအချုပ်အချယ်ကင်းတဲ့လူငယ်ဘဝမှာလွပ်လွပ်လပ်လပ်နေပစ်လိုက်ဖို့ Message လေးရင်ထဲရောက်လာစေမယ့်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုညွှန်းရင်းဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး.... #Anime_Petals